Mamory Ivato : Dimy lahy nanafika « cyber », maty voatifitra ny mpiambina – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2015 → décembre → 21 → Mamory Ivato : Dimy lahy nanafika « cyber », maty voatifitra ny mpiambina
« Cyber » iray vao nisokatra vao tsy ela akory izay, no lasibatry ny asan-jiolahy ny sabotsy hariva lasa teo. Vola manodidina ny roa tapitrisa ariary teo no lasan’ireo olon-dratsy. Maty notofirin’ireo jiolahy dimy kosa ny mpiambina an’ity toerana ity.
Nandriaka ny rà teny Mamory Ivato, ny harivan’ny sabotsy lasa teo, tokony ho tamin’ny enina ora latsaka fahefany tany ho any. Nirefodrefotra ny basy. Jiolahy dimy lahy nitondra basy mahery vaika sy poleta no niditra tao amina toerana fikirakirana « internet ». « Mety ho efa tsikaritry ny mpiambina ny fihetsik’ireo olon-dratsy ka nandray ny andraikiny avy hatrany izy » hoy ireo mponina teny an-toerana. Atody miady amam-bato anefa ny an’ity tovolahy ity. Tsy nisy alaharo alaharo ny an’ireto jiolahy tsy mifaditrovana ireto fa avy hatrany dia ny basy teny an-tanan’izy no nasetriny an’ilay mpiambina. Niantefa teny amin’ilay tovolahy, mpiambina an’ity toerana ity ny bala maro izay nahalavo azy. Maty tsy tra-drano ny lehilahy. Amin’ny enina ora hariva izany no tena fiasana ho an’ireo « cyber ». Mbola maro araka izany ireo olona nikirakira « internet » tao amin’ilay toerana no niditra ireo olon-dratsy. Ambonin’ny vola tao amin’ity « cyber » ity dia mbola nanendaka ireo mpanjifa ihany koa ry zalahy. Ary tsy vitan’izay nanendaka fa mbola nandratra olona ihany koa. Vehivavy iray, mpanjifa tao an-toerana no nodarohan’izy ireo ka naratra mafy teo amin’ny tongony. Tapaka mihitsy moa ny feny, raha ny loharanom-baovao avy eo anivon’ireo mpitandro filaminana. Vola nahatratra tany amin’ny roa tapitrisa ariary tany ho any kosa no nentin’ireo olon-dratsy nitsoaka, niampy fahana finday manodidina ny roa hetsy ariary teo.
Vao nirefotra ny basy dia efa nandray ny andraikiny ny mponina niantso mpitandro filaminana, izay tonga haingana teny an-toerana. Raikitra avy hatrany ny fifanenjehana tamin’ireo mpanafika. Tsy lasa lavitra ny iray tamin’ireo olon-dratsy ka tra-tehaka. Tafaporitsaka niaraka tamin’ny vola kosa ny efa-dahy namany. Efa mandeha ny famotorana ity olon-dratsy tratra ity, izay nentina avy hatrany tany amin’ny biraon’ny zandary teny Ivato. Mitohy kosa ny fikarohana ireo namany hafa, raha ny vaovao hatrany. Efa nomena ny havany ny vatana mangatsiaka an’ilay tovolahy namoy ny ainy. Nentina namonjy toeram-pitsaboana kosa ilay naratra. Akaiky tokoa ny fety dia mirongatra indray ny asan-jiolahy. Vao tsy ela tokoa mantsy, teny Ambohidratrimo teny no nisiana fanafihana fivarotan-tsolika. Mbola miriaria any ireo olon-dratsy saingy efa fantapantatra tamin’ny « camera » kosa ny endriny.
Lazalazao Tsimiamboholahy 22 décembre 2015 at 1 h 33 min · Edit
Zidane on asa tokony hataon’ny mpitondra Ny filaminana vaigon-dohan-draharaha. Ary tsy tokony hisy intsony ireny basy mandehadeha ireny. Avy aiza izy ireny. Tokony handresy mahatra NY mponina ireo mpitondra NY filaminana @ VOKATRY Ny asany.